Sesivele sifike ku-200.000 ukuvakashelwa | Kusuka kuLinux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-GNU / Linux
Isithombe esivela ku: http://djbisparulz.deviantart.com
Kulungile ... ngemuva kwe- umsulwakwabathile abanambitheka kabi) ngu-elav, Ngikuphathele izindaba ezimnandi haha.
Njengoba ngibhala le ndatshana, ngingakutshela ngaphandle kokungabaza ukuthi omangaze kakhulu yimi ...
Leyo, <° I-Linux kwathatha izinyanga ezimbalwa ukufinyelela Ukuvakashelwa okungu-100.000 okunqwabelene, okujwayelekile njengoba siyisiza esisesincane, imininingwane ngukuthi kuthathe kuphela ezinye izinsuku ezingama-42 ukufinyelela isibalo se 200.000 ukuvakashelwa okuqoqiwe. OMFG !!! phakathi ngaphansi kwezinsuku ezingama-45 sivakashelwe ngaphezu kwe-100.000, AMAZIMU !!!
Njengoba ngikutshelile, okungimangaze kakhulu yimi, ngoba bengingenzanga ukubala engisanda kukuchaza O_O
Sikwazile kanjani ukufeza lokhu?
Ngisho nami angikwazi LOL !!! ... ngokumane, sizamile ukubhala izindatshana ezithandwa yibo bonke abantu, ngakho konke ukuthanda ... akunandaba ukuthi usebenzisa I-Linux Mint, Ubuntu, Kubuntu, I-Arch Linux, Debian, Mageia noma iyiphi enye i-distro, noma ngabe usebenzisa yiphi imvelo yedeskithophu (KDE, Xfce, njll), inhloso yethu bekulokhu ukufinyelela inani elikhulu labasebenzisi, ngoba uyisizathu sesiza.
Ya izinga futhi mina (KZKG ^ Gaara) akusibona bodwa abashicilelayo, kanye nathi sebekwazile ukubona Isibindi, pvv92 y U-Erithrym, Abangani abathathu babaningi esazi ukubonga kubo <° I-Linux. Ngamunye ngendlela yakhe uqobo yokubona umhlaba weFree / Open Source Software, uzama ukudlulisa ulwazi lwakhe kubafundi, kwesinye isikhathi kutholakala kanti kwesinye isikhathi cha.
Ngokusobala akuyona yonke into ebinomsoco (usho kanjani ... yize ngingawuthandi umbala opinki haha). Sibe nezinkinga eziningana ngokusingathwa kwethu (izinkinga ezingeke zisaba khona ngo-2012), Abanye babafundi / abasebenzisi ababeke amazwana ekuqaleni ababuyelanga ukushiya umbono wabo, futhi ngeshwa i-flamewar yezikhathi ezithile.
Siyawazi amaphutha noma izinkinga ezenzekile kulezi zinyanga, okwamanje ufunda lokhu wazi ukuthi, ngawo lowo mzuzu sisebenzela ukuthuthukisa isiza, ikhwalithi yama-athikili, ukwesekwa kwezobuchwepheshe nokuningi 😉
Futhi akukho lutho, ngiyabonga kakhulu kini nonke ngokwenza konke lokhu kwenzeke ... le nombolo ezinyangeni ezimbalwa ngeke isho lukhulu ngokombono wezibalo kanjalo, kepha ngokubuka komuntu ... kuhle ukukwazi ukufinyelela kulesi sibalo ngaphambi nje ekupheleni konyaka 😀
Sanibonani futhi ngiyabonga bangane 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Sesivele sifinyelele ku-200.000 ukuvakashelwa
Yebo, njengoba isiwula sango-Ephreli senziwe kuwe ngaleyo datha, uma nje sihamba sizungeze amakati afanayo ayi-100 njengokuhlala njalo ...; D
hehe cha angicabangi kanjalo, bengilokhu ngibuyekeza le datha izinsuku ezimbalwa 🙂
LOL !!! Ngicabanga ukuthi ufanelekela i-Official Troll HAHAHAHA !!!
I-Troll Esemthethweni?, Kuzwakala kulinga kepha angifiki lapho, kukhona abanye abanamakhono amaningi futhi angcono okuba yiyo… xDDD
Ukuhalalisela kwami ​​okuqotho eqenjini le- <° Linux, qhubekani bafana impumelelo ingeyenu, kusukela namuhla ngizibiza ngomlutha webhulogi, ukuthi isilinganiso esilandelayo kuzoba ukuvakashelwa okungu-1.000.000.
Indoda… kuhle, sihalalisela wonke umuntu!
Futhi, yini okubalulekile uma singamakati afanayo ayi-100 njengenjwayelo, uma ngabe lelo nani lokuvakasha likhonjiswa ukuthi singamakati ayi-100 asebenza kakhulu?
Ukuhaga okukhulu kulo lonke iqembu le- <° I-Linux
Empeleni ukube besingabasebenzisi abayi-100 bekungaba kuhle HAHAHAHA, asikafiki kuleso sibalo okwamanje LOL !!!!
Ukubingelela nokubonga kuwe Tina, kuyintokozo enkulu ukukufundela 😉
Lawula lawo mahormone indoda endala, awusemdala ... HAHAHAHAHA
Ngicabanga ukuthi ngenxa yezibalo, ngizoqala ukukhokhisa ukufundwa ¬ ¬ ngizoceba !!! I-XD XD
Halala, ngiyabonga futhi ngiyabonga nonke!
Ngisho nami angazi
Kulula kakhulu: Ukuvuselelwa okuqhubekayo, ababhali abaningana, izindatshana ezingakhethi.
Ukubona leso sipelingi
Iqiniso laba enye yezintandokazi zami ngesikhathi esifushane kakhulu
Ngiyabonga kakhulu JEN_3534, lolu uhlobo lwamazwana olusimema ukuba siqhubeke 😀
Ngiyakuhalalisela nawe 🙂
Iphathi yabo bonke xd
Okuncane kimi, ngincamela ukuthula
Kimi ziyibhulogi ehamba phambili ngeLinux.
Indoda uff ... hhayi kangako haha, sisene LOT yokufika lapho haha.
Noma kunjalo, ngiyayithokozela imibono 😀
Ukubingelela futhi kuyintokozo ukuba sezintandokazi zakho 😉
Bengihlala ngithi, ngiyayithanda le bhulogi.
Kusukela ekuqaleni bengicabanga ukuthi bazophumelela kanti angizange ngibe nephutha. Bheka lokho kuvakasha, unomona.
Bayibethele, bayigcine, kungekudala bazoba ngamabhulogi e-Linux athandwa kakhulu futhi abalulekile.
Okwamanje ngizoqhubeka nokulwa neGoogle Panda empini yokufa ukuze ngibone ukuthi ngingenza yini ukuthi ibhulogi ikhuphuke.
Ngiyabonga kakhulu futhi ngamukelekile kulezi zingxenye 😀
Kwakuhlale kuyisifiso sethu ukuba ne-blog, ukwabelana ngolwazi lwethu ngendlela enamandla, ukufinyelela izethameli eziningi ... ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ithuba laziveza, sibonga abanye babangane bethu (uGabriela, uRenata no-Estevan) sikwazile ukudala i- <° Linux, okunye kukuwe 😀
Sizozama konke okusemandleni ukwenza lowo mehluko osweleka kakhulu kunethiwekhi.
P.S: Angazi nakancane ngeGoogle Panda entsha ... angikaze ngifunde nokuthi isebenza kanjani, asikhathazi kakhulu ngeSEO kuze kube manje ^ _ ^ U
from planetubuntu.es, to novatillasku, from there to the linux ranking, and from there to from linux ibhulogi inemibala enobungani, ukuhleleka kokuqukethwe okuhambisanayo, ilogo elula, nokuqukethwe okuhle, qhubeka njalo! Ngibalandela kusuka ezweni elingudade waseMexico.
Phendula kujesu perales
Kuyintokozo ngempela ukwazi ukuthi umsebenzi wethu uyahlonishwa, kusishukumisela ukuthi siqhubeke nokubhala (futhi uma kungenjalo, sitshele Tina y Perseus, esivele inezindatshana eziningi kulayini we-HAHAHA).
Ngiyabingelela futhi sinethemba lokuqhubeka nokuthanda kwakho 😉
Kumabhulogi amathathu we-Linux engiwafundile, lokhu kuyintandokazi yami ngenxa yezihloko ezinhle ezahlukahlukene 🙂 Qhubeka nomsebenzi omuhle nenhlanhla kulo nyaka ozayo.